Ciidamada Xasilinta oo Naceyb ka dhax abuuraya Shacabka iyo Dowladooda !! – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaCiidamada Xasilinta oo Naceyb ka dhax abuuraya Shacabka iyo Dowladooda !!
Ciidamada Xasilinta oo Naceyb ka dhax abuuraya Shacabka iyo Dowladooda !!
Magaalada Muqdisho waxaa ka howlgala ciidamo isku dar ah oo loo bixiyay magaca Xasilinta, waxa ayna ciidankan inta badan ka howl galaan koontaroolada laga soo galo Muqdisho iyo kuwa dhax yaala magaalada.
Ciidankan ayaa markii hore loo abuuray in hubka ka dhigaan maleeshiyaadka iyo ciidanka dowlada ee sida sharci darada ah magaalada ku jooga, waxaana ciidankan intii ay magaalada ka howl galayeen marar badan isku dhaceen ciidanka kale oo dowlada katirsan.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaa markii hore aad ugu riyaaqay waxqabadka iyo howlgalada ciidanka Xasilinta, hasa ahaatee ciidankan ayaa hada u muuqda kuwa jaceylkii shacabka u qabeen ku bedelanaya naceyb.
Isgoosyada magaalada Muqdisho ayey ka howlgalaan ciidankan xasilinta, waxaana ciidankan loogu tala galay in ay baaraan gaadiidka maraya isgoosyadaasi kadibna sii daayaan baaris kadib gaadiid lagu waayo hub sharci daro ah iyo qaraxyo.
Ciidankan ayaa hada noqday kuwa aan u damqan shacabka Muqddisho mid dhiban iyo mid caadi ahba, waxaana wadooyinka magaalada dhaxdooda marar badan ku umulay ama ku geeriyooday dad loo diidaan in ay maraan wadooyinka si isbitaalo loo geeyo.
Sida aan Wararka ku heleyno ciidanka Xasilinta ayaa amarada jidadka ay ku xiraan mararka qaar ka hela Taliyaashooda halka mararka qaarna ciidankan iskood jidka u xirtaan si ay u nastaan una qayilaan.
Isgoosyada ay joogaan ciidankan ayaad arkeysaa iyaga oo biro iyo dhagxaan ku xirtay iskana qayilaya, waxaana laamiga buuxa gaadiid iyo mootooyin doonaya in ay jidka maraan balse la’ cid la hadasha askariga ugu roon ayaan dadka inta qoray ku taago ku amra in ay dib u laabtaan.
Hab dhaqanka ciidanka Xasilinta oo shacabka Muqdisho u bixiyeen ciidanka Xaasidiinta ayaa abuuraya in shacabka ay nacaan dowladooda iyo Madaxda hogaamisa, waxa ayna shacabka marar badan ugu baaqeen madaxda in wax laga bedelo ciqaabta shacabka la marsiiyo.
” Waa ayaan daro in askari iskiis jidka u xirto iyada oo shacab badan laamiga tuban yihiin, waa kugu adag tahay hadaad lamaiga Wadnaha soo dhaafto in gurigaaga ku tagto baabuurkaada ama Mooto, waxaad arkeysaa dad da’ ah kuwa xanuunsan iyo gabdho foolanaya oo jidka loo diidayo in ay maraan, ciidanka ma xuma in ay gaadiidka baaraan kadibna sii daayaan, laakin ma jirto cid kula hadleysa hadaad askariga u dhawaatana qoray sanka lagaa galinayaa” Ayuu yiri kid kamid ah shacabka Muqdisho.
Waxaa aad u adag hadii aad dagan tahay Degmooyinka Muqdisho qaarkood sida Waabari, Xamar Jajab , Xamar Weyne iyo kuwa kale oo badan oo aad ka gudubto laamiga Wadnaha in aad mar kale si fudud ugu soo laabato xaafadaada.
Shacabka Muqdisho ayaa ku aamanaya dowlada iyo ciidankeeda dadaalka iyo ka shaqeynta amniga ay wadaan , waxa ayna ugu baaqeen in ciidanka noqdaan kuwa naxariis badan oo u dhimriya shacabkooda gaar ahaan kuwa dhibaateesan ee jidadka maristooda lagu ciqaabo.
Mararka qaarkood waxaad arkeysaa dad iska ooynaya oo ilmo badan wata hadana loo diidayo in ay maraan gaadiidka ama mootooyinka ay saaran yihiin isgoosyada Muqdisho, ciidankan ayaana inta badan shacabka ula dhaqma si aan wanaagsaneyn.
Magaalada Muqdisho jidadkooda ayaa inta badan lagu jaray dhagxaan halka wadooyinka furana joogaan ciidamo badan , hadana waxaa magaalada ka dhacaya qaraxyo dilal qorsheesan ay geesanayaan kooxaha dowlada kasoo horjeeda.
XOG: Shaqsi uu wato G/Golaha Shacabka JF oo loo wado in loo magacaabo degmada Boondheere